Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote Robertine: Hangataka fisaraham-panambadiana ny vadiny
Depiote Robertine: Hangataka fisaraham-panambadiana ny vadiny
Iray tamin’ireo raharaha niteraka resabe teto amin’ny firenena, tapa-bolana lasa teo izay, ny raharahan’ny depiote Rabetafika Robertine izay voafidy tany amin’ny distrikan’Isandra. Raha tsiahivina dia niparitaka tany anaty tambazotran-tserasera sosialy ny sary sy ny horonan-tsary mamoafady ahitàna ity olom-boafidy ity miboridana tanteraka. Tao aorian’izay, nitondra fanazavana tamin’ny vahoaka ny depiote Robertine Rabetafika izay nilaza fa sary sy horonan-tsary tao anatin’ny findain’ny vadiny very tany Frantsa ireny nisy nanaparitaka tao anaty tambazotran-tserasera ireny. Tsy fantatra aloha ny tena fahamarinan’ny fanazavana nentin’ity solombava-
mbahoakan’Isandra ity fa raha ny feo mandeha, tao anatin’ny andro vitsy izay, dia hangataka fisaraham-panambadiana ny vadiny, izay tsy iza fa i Rapelanoro Rabenja mpanamory fiaramanidina ao amin’ny kaompania Air Madagascar. Azo eritreretina fa nahatsiaro tena ho afa-baraka ingahy Rapelanoro Rabenja tamin’ireny sarim-badiny miboridana hitam-poko hitam-pirenena ireny ka izay no antony nandraisany izany fanapahan-kevitra izany. Tsara marihana mantsy fa fianakaviana manana ny maha izy azy eto amin’ny firenena ny fianakaviana Rapelanoro Rabenja ka tsy te ho ratsy endrika manoloana ity raharaha niteraka resabe teto amin’ny firenena ity.